I-MPV 0.33 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo | Ubunlog
Emva kweenyanga ezili-11 zophuhliso yatyhilwa ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yomthombo wevidiyo evulekileyo "MPV 0.33"eyathi kwiminyaka embalwa edlulileyo yahlulwa kwi-MPlayer2 ikhowudi yeprojekthi. Lo mdlali wemidiya Iphawuleka ngokusebenza phantsi komgca wokuyalela, ngaphandle komdlali Inemveliso yevidiyo esekwe kwi-OpenGL.
MPV ijolise ekuphuhliseni amanqaku amatsha kunye nokuqinisekisa ngenkxaso eqhubekayo Izinto ezintsha ezivela kwindawo yokugcina izinto zaseMPlayer ngaphandle kokukhathazeka ngokugcina ukuhambelana ne-MPlayer.
Ikhowudi ye-MPV inelayisensi phantsi kwe-LGPLv2.1 +, ezinye iindawo zihlala phantsi kwe-GPLv2, kodwa ukufudukela kwi-LGPL kuphantse kugqityiwe kwaye unokusebenzisa "-enable-lgpl" ukhetho ukukhubaza ikhowudi yeGPL eseleyo.
1 Iimpawu ezintsha eziphambili ze-MPV 0.33
2 Uyifaka njani iMPV 0.33 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
2.1 Uyifaka njani iMPV kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Iimpawu ezintsha eziphambili ze-MPV 0.33
Kule nguqulo intsha yomdlali, kugqityiwe utshintsho olubalulekileyo kwaye kufanelekile ukukhankanya umzekelo inkxaso yokulayisha izikripthi ezivela kwimikhombandlela kunye nokwazisa izikripthi kwimisonto eyahlukeneyo.
Kananjalo nokukwazi ukucoca imibhalo engezantsi ngentetho eqhelekileyo, kunye nemiyalelo ye-asynchronous kunye neengxoxo ezinamagama.
Olunye utshintsho olwahlukileyo lukhetho olutsha lokusebenzisa ukulandelelana kwevidiyo eyahlukileyo kunye nenkxaso yokuboniswa kweepikseli eziphezulu (HiDPI) nayo yongezwa kwiqonga leWindows.
I-X11 (vo_x11) yemodyuli yemveliso yongeza inkxaso yeebits ezili-10 kwisitishi ngasinye sombala, ukongezwa kwabathengi be-API ekunikezelweni kwesoftware, kunye nesikali sesixhobo sokucoca isikali esisekwe kwikhowudi ye-Chrome.
Inkxaso yogcino lwendawo yogcino isuswe (ngenxa yeempazamo ezingafakwanga), ikhowudi eseleyo isuswe ukuze ihambelane neLibav. Imodyuli ye-stream_smb isusiwe kwaye inkxaso yenkxaso yemveliso nge-sndio, rsound, kunye ne-oss isusiwe.
Isilayidi se-URI: // songezwa kulayishwa iinxalenye zomjelo.
Ukulayishwa ngokuzenzekelayo kweefayile zangaphandle ezineziciko zealbham kubonelelwe.
Yongezwe imodyuli ye-vo_sixel, ebonisa ividiyo kwisiphelo sendlela usebenzisa i-pixel graphic (i-pixel emithandathu, ubeko lweebhloko ezintandathu).
Ukuphinda kubhalwe ikhowudi yokuqhubekeka kwesandi kunye ne-AO API.
Xa usakha, i-GLX ikhubazekile ngokungagqibekanga.
Okokugqibela, tKukwakhankanyiwe ukuba iimfuno zenkqubo zandisiwe, ngoku ifuna iFFmpeg 4.0 okanye iphakheji entsha ukuze isebenze. Inkqubo yokwakha (bootstrap.py) ifuna iPython 3.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nale nguqulo intsha, ungadibana ne iinkcukacha kwikhonkco elilandelayo.
Uyifaka njani iMPV 0.33 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulungiselelwe abo banomdla wokukwazi ukufaka le nguqulo intsha yomdlali kwiinkqubo zabo, Banokwenza oko ngokulandela imiyalelo esabelana ngayo ngezantsi.
Ukusukela uhlaziyo lwakhutshwa kutshanje ngeli xesha, Indawo yokugcina esemthethweni yomdlali ayikahlaziyi iipakeji zayo. Ukufumana i-MPV 0.30 siza yenza ukudityaniswa komdlali kwinkqubo.
Ngale nto kufuneka sifumane ikhowudi yemvelaphi yomdlali, esinokuyifumana ngokuvula i-terminal kwaye uchwetheze lo myalelo ulandelayo:
Emva kokukhuphela iphakheji, ngoku kuya kufuneka uyivule kwaye uyiqokelele kwisiphelo esinye kunye nalo myalelo ulandelayo:
Okokugqibela kwabo bakhetha ukulinda uhlaziyo lokugcina okanye kwabo bafuna ukuba uhlaziyo lomdlali laziswe kwaye lufakelwe, banokongeza indawo yokugcina yomdlali kwinkqubo yabo ngokuchwetheza oku kulandelayo kwisiphelo sendlela.
Kwanele ukuba aYongeza indawo yokugcina (PPA) MPV kwinkqubo yakho ngalo myalelo ulandelayo:
Ngoku siyaqhubeka nokuhlaziya indawo yokugcina kunye nokufaka usetyenziso.
Uyifaka njani iMPV kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Nokuba kungasiphi na isizathu ofuna ukukhipha i-MPV, Ungayisusa iPPA ngokulula, Kufuneka nje siye kuseto lweNkqubo -> iSoftware kunye nohlaziyo-> Enye ithebhu yesoftware.
Kwaye ekugqibeleni Sisusa usetyenziso ngomyalelo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » I-MPV 0.33 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
Meld, thelekisa iifayile kunye neefolda kwi-Ubuntu